Macallimiintu kama Muhiimad Hooseeyaan Ciidamada Qalabka Sido
By ibrahim Aden shire November 21, 2017
Maalmaha loo asteeyay weynaanta ciidamada kala duwan sida booliska, militiriga iyo asluubta, waxaa si weyn ooga qayb galo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaan aragnaa madaxda dalka ugu sarrayso oo xiran dirayska ciidamada. Waxay ka qayb galaan xafladaha lagu maamuusayo weynaynta maalmahaas ilaa aan aragnay madexweyne Farmaajo oo inta bururay qoob-ka-cayaar masraxa la fuulay isagoon is ogayn.
Waxaa idaacadaha dowladda laga siidaayaa heesaha loo qaaday ciidamada waxaana meel walba lagu xardhaa astaamaha kala duwan ee lagu aqoonsado ciidamada. Bulsho weynta soomaaliyeed ayaa iyaguna muujiyo taageerada ay u hayaan ciidamada waxayna ooga qayb qaataan siyaabo kala duwan weynanta maalmahaas. Meelaha aan sida weyn ooga arki karno taageerada dad weynaha ayaa ah baraha bulshada oo ay dadku kusoo bandhigaan erayo ama sawiro muujinayo taageerada ay u hayaan ciidamada.
Si taasi ka duwan, maanta oo ah (21/11/17) maalinti loo asteeyay xusidda macalinka Soomaaliyeed ayaan si muuqato meelna looga xusin. Maannan arak madax booqanayso malcamado iyo iskoollo. Ma aannan maqal heeso iyo gabayo lagu ammaanayo macalinka oo la baahinayo. In aysan macallimiintu ahmiyad weyn u lahayn dowladdu waxaan kale oo aan ka dheehan karnaa miisaaniyaddi shalay uu wasiirka Maaliyaddu soo bandhigay.
Miisaaniyadda sanadka danbe ayaa la sheegay inta ay tahay iyo sida loo qorsheeyay. Qorshaynti dhexdeeda ayaa lagu sheegay in haddii la waayo lacagta la filayo inay soo xarooto isbadal lagu samaynayo waaxaha loo qoorsheeyay. Kuwa lama taabtaanka ah ee aan tooda la faragalin doonin ayaa lambar kow looga dhigay ciidamada qalabka sido iyadoo aanba lasooqaadin macalimiinta. Habdhaqanka madaxda iyo aamusnaanta dad weynuhu waxay na tusaysaa in loo arko in macallimiintu aysan la muhiimad ahayn ciidamada. Xaqiiqduse waxa ay tahay inay isku mid yihiin haddii aysan macallimiintu bur sidan.
Haddii ay ciidamadu cadow bannaanka nooga soo duulay naga daafacaan, macallimiintu waxay sidoo kale naga daafacaan cadowga bannaanka ee maskaxda nooga soo duulay. Hadii ay ciidamadu naga difaacaan cadowga xoogga ku qaadan rabo dhulkeenna macalinku wuxuu naga daafacaa kan qalinka ku qaadan rabo. Haddii ay ciidamadu naga difaacaan cadowga rabo inuu dadkeenna laayo, macalinku wuxuu naga daafacaa kan rabo inuu dadkeenna oo nool naga qaato oo dad kor ka soomaali, maskax ka shisheeye ah noo dhiibo taas ayaana ka xun dhimashada.
Haddii ay ciidamadu sugaan amniga iyo kala danbaynta, macalinku wuxuu sugaa edebta iyo anshaxa oo la’aantood aan ammaan la heli karin. Haddii ay ciidamadu u taagan yihiin ka hortagga cadowga muuqdo, macalinku wuxuu u taagan yahay la dagaalanka cadowga qarsoon ee jahliga. Haddii ay ciidamadu yihiin ilaaliyaha calanka soomaaliyeed, macalinku waa sare u qaadaha calanka la ilaalinayo.
Marki ay dhinac walba ka sinneedeen xaqa shaqada ayay macallimiintu wax sii dheeraadeen taaso ah inay iyagu yihiinkuwa soo saaro ciidan qaran oo tayo leh. Ciidan dal iyo dad daafaco waa inuu lahaadaa qadiyad iyo qaayosoor uu dagaalamo, labaduba suura gal ma noqon karaan haddii aan la helin macalin baro. Sidoo kale, ma dhici karto in ciidan aan aqoon lahayn uu yeesho asluub ciidan, aqoontana waxaa laga qaataa macalinka. Si kooban way dhici kartaa in la helo macalin fiican iyadoon la haysan ciidan laakiin ma dhici karto in la helo ciidan fiican iyadoon la halayn macalin.
Sidaa darteed wax walba oo aad ka aaminsantahay ciidanka mid u dhiganta ka aamin macalinka. Haddii aad aaminsantahay inuusan ciidan baahan dal difaacin, sidoo kale aamin in macalin baahan uusan dal difaacin. Haddii aad aaminsantahay inaysan suuragal ahayn in ciidan ay mushaar siyaan Maraykan iyo Imaaraad ay wadaniyiin noqdaan, sidoo kale aamin in macalin ay UNICEF iyo Sacuudi mushaar siyaan uusan soo saarin dad waddaniyiin ah.
Macallmiintu waa Aabe iyo hooyo, waa kuwaan ku aaminnay ubadkeenna, waa kuwa aan ka sugayno dad qiimo leh oo dalka noo dhiso, waa kuwa aan ka sugayno waraso wacan oo wax maqasho, waa isha kaliya ee mustaqbalku ka burqado. Ishaas waxaa ka imaan wixii la galiyo, haddii aan ixtiraam, qiimayn, sharaf iyo jeceyl ku abuurno waxaa ka soo burqan biyo macaan oo soo saaro nabaad nacfi badan, haddiise aan, sida aan hadda nahay, liidmo, yesmo, iyo naceyb ku shubno waxaa kasoo burqan cusbo-eel baajeer mooyee wax kale aan reebin.
Aan u wada istaagno raadinta xuquuda macalimiinta iyo weynantooda. Qof walba naftiisa ha iska xil saaro sidii uu macalinka sare u qaadi lahaa ka dibna si wada jir ah aan culays ku saarno madaxda, maamullada iyo hayadaha intaba inay sida u dhaamaan macallmiinta.